Warbixin: Ciidamada Al-Shabaab, imisa ka mid ah ayaa caruur ah? – idalenews.com
Muqdisho (INO) – Antonio Guterres oo ah Xoghayaha Guud ee QM ayaa si adag uga hadlay sida ba’an ee Kooxda Al-shabaab u isticmaalayaan Carruurta la hubeeyay ee ku huriyaan dagaaladooda.
Antonio Guterres, waxa uu tusaale usoo qaaday Dagaalkii dhawaan Ciidamada Puntland iyo Kooxda Al-Shabaab ku dhexmaray Deegaanka Suuj oo Shabaabku ay u adeegsadeen Carruur aad u yaryar oo aan muteysan in loo dhiibo Hubka.
Antonio Guterres, waxa uu tilmaamay in lawada ogyahay in Ciidamada Puntland ay dagaalkaasi ku qabteen in ka badan 60 Carruur ah kuwaa oo aan garaneynin sida Hubka loo rido maadaama ay yihiin Carruur ay qaan gaarin oo ka yar 18 jirka.
Antonio Guterres, waxa uu intaa ku daray in Carruurta intaa la’eg da’dooda loo adeegsado fulinta weeraro Ismiidaamin ah, waxa uuna dhaqanka Kooxda Al-Shabaab ku sheegay mid aad uga liita heerkii laga filaayay, sida uu hadalka u dhigay.
Lixdii sano ee ugu dambeysay ayaa waxaa Soomaaliya ciidan ahaan loo qortay 6,200 oo caruur ah.
Waxa uu sheegay in in ka badan 60% dhammaan ciidamada kooxda Al-Shabaab ay yihiin caruur, taasi oo uu ku macneeyey wax aan la aqbali karin.
Xoghayaha Guud ee QM Mr Antonio Guterres, waxa uu maamulada Somalia ugu baaqay in si wanaagsan ay ula dhaqmaan Carruurta aadka u da’yar oo ay marin habaabisay Kooxda Al-shabaab, si buu yiri looga baabi’iyo dhaqan xumida ay bareen Al-shabaab.
Docda kale, Qeyla dhaanka Xoghayaha Guud ee QM Antonio Guterres, waxa ay kusoo aadeysaa xili Bishii May 2016, Wargeyska Washiton Post, oo warbixin ka qoray in Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugida Somalia Sirdoon ahaan u adeegsato Carruurta kasoo goosata Al-shabaab.
Madaxweynaha Gambaia Yahya Jammeh oo Go’aan Lama Filaan Ah Qaatay